အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ ပရိသတ်ကို အားပေးလာတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် နေတိုး – Shwe Likes
အကယ်ဒမီ မင်းသားချော နေတိုး ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တွေကို အခိုင်အမာ ယူထားနိုင်သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. နေတိုးက ကြော်ငြာမှာရော ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းကားတွေ မှာလည်း သရုပ်ဆောင် ပိုင်နိုင်လွန်းတာကြောင့် လူကြီးရော လူငယ်ပါ အသည်းစွဲချစ်နေရတဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားချော နေတိုး ကတော့ အနေအထိုင် သိုသိပ်သူပီပီ ချစ်သူရှိနေတာကို သိပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီလား ဆိုတာကို လည်း ပရိသတ်ကို အသိမပေးဘဲ နေထိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို သိုသိပ်ပြီးနေတတ်သူပီပီ နိုင်ံငံရေးနဲ့ ပက်သက်လာရင်လည်း တိတ်ဆိတ် လွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ
ရဲ့ ဝေဖန်ခြင်း ကို ခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားချော နေတိုးက ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဖြေရှင်းချက်ပေးလေ့မ ရှိဘဲ သူလျောက်လှမ်းနေတဲ့ လမ်းကိုသာ ဂရုစိုက်ပြီး နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး လူတိုင်းက သတိကြီးစွာ နေထိုင်နေရချိန်မှာ မင်းသားချော နေတိုးက ပြည်သူတွေကို
အားပေးစကားလေး ပြောနေရင်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ တစ်ဖန်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ မင်းသားချော နေတိုးက လက် ၃ ချောင်းထောင်ရင်း အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးနဲ့အတူ ပြည်သူတွေကို အားပေးစကားပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားချော နေတိုးကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်း တစ်ခုခုပြောပေးသွားကြပါအုံးနော်…
အကယ္ဒမီ မင္းသားေခ်ာ ေနတိုး ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို အခိုင္အမာ ယူထားနိုင္သူ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္. ေနတိုးက ေၾကာ္ျငာမွာေရာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းကားေတြ မွာလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္နိုင္လြန္းတာေၾကာင့္ လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါ အသည္းစြဲခ်စ္ေနရတဲ့ မင္းသား တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းသားေခ်ာ ေနတိုး ကေတာ့ အေနအထိုင္ သိုသိပ္သူပီပီ ခ်စ္သူရွိေနတာကို သိေပမဲ့ လက္ထပ္ဖို႔ အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီလား ဆိုတာကို လည္း ပရိသတ္ကို အသိမေပးဘဲ ေနထိုင္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကို သိုသိပ္ၿပီးေနတတ္သူပီပီ နိုင္ံငံေရးနဲ႕ ပက္သက္လာရင္လည္း တိတ္ဆိတ္ လြန္းေနတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ
ရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္း ကို ခံေနရသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးက ေဝဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့ရင္လည္း ေျဖရွင္းခ်က္ေပးေလ့မ ရွိဘဲ သူေလ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ လမ္းကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေနထိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေရးနဲ႕ပက္သက္ၿပီး လူတိုင္းက သတိႀကီးစြာ ေနထိုင္ေနရခ်ိန္မွာ မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးက ျပည္သူေတြကို
အားေပးစကားေလး ေျပာေနရင္း လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမွာ တစ္ဖန္ေပၚလာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီေန႕ေလးမွာေတာ့ မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးက လက္ ၃ ေခ်ာင္းေထာင္ရင္း အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္ဆိုတဲ့ စာတန္းေလးနဲ႕အတူ ျပည္သူေတြကို အားေပးစကားေျပာလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးကို ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ႀကီးလည္း တစ္ခုခုေျပာေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္…
မြန်မာ နိုင်ငံ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ အတွက် ရန်ပုံေ ငွရရှိရန် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဈေးရောင်းပွဲပါ ကျင်းပသွားမယ့် သူဇာဝင့်လွင်
ကိုဗစ် ကာကွယ်နိုင်ရန် အိမ်မှာနေရင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပီအပြင် လုပ်နေတဲ့ ကိုရာဇာနေဝင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်